App Outlet - GNU / Linux အပလီကေးရှင်းများအတွက် universal store တစ်ခု Linux မှ
App Outlet - GNU / Linux အပလီကေးရှင်းများအတွက် universal store
Outlet App ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဗဟိုပြုရန်စိတ်ဝင်စားသော application တစ်ခုဖြစ်သည် အွန်လိုင်းစတိုး ငါတို့အဘို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သော applications များ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များအသစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုပ်ပိုးပုံစံများအပေါ်အခြေခံပြီး (Flatpak, Snap နှင့် Appimage) ရရှိနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် Outlet App ၎င်းကိုဖန်တီးပြီးကတည်းက၎င်းသည်အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုအဟောင်းမှုတ်သွင်းထားသော application store အဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည် Linux App Store (https://linuxappstore.io/) ကြောင်းမရှိတော့တက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ရိုးရှင်းသောနှင့်ဖော်ရွေသောမျက်နှာပြင်သည်ဖြန့်ဝေမှုအများစုတွင်အလုပ်လုပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေ၊ ဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်နိုင်သည် GNU / Linux များ.
Outlet App အွန်လိုင်း application များ၏ဝက်ဘ်စတိုးဆိုင်များသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊
သက်ဆိုင်ရာ application များသို့မဟုတ် add-ons များကို application မှတဆင့်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် OCS-Url။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤအခြားစတိုးဆိုင်များအကြောင်းပြောဆိုပြီးလျှောက်လွှာတင်မည် OCS-Url.
1 App Outlet - App များအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်
App Outlet - App များအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်
download လုပ်ပါ Outlet App ငါတို့ဆီသို့ငါတို့သွားရမည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ preference ကိုသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ format နဲ့ download လုပ်ပါ။ လောလောဆယ်၎င်းကိုအောက်ပါ installation form များဖြင့်ရနိုင်သည်။
။ ပုံ (68.2 ကို MB)
deb (46.3 ကို MB)
.tar.gz (64.4 ကို MB)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုအတွက် package ကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ် .deb format terminal မှတဆင့်တပ်ဆင်သည်။
အထုပ်အတွက် download လုပ်ပြီးတာနဲ့ .deb format ကျနော်တို့ကိုသုံးပြီး terminal မှတဆင့်ထည့်သွင်းရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက် command "dpkg", အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းတွင်ဖန်တီးထားသောဖြတ်လမ်းကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည် menu အမျိုးအစား«ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ»။ ဒါမှမဟုတ် terminal ကိုသုံးပြီး run ပါ အမိန့် "app-outlet"။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပထမနည်းဖြင့်မအောင်မြင်ပါက terminal မှပြသောအမှားအမျိုးအစားကိုဒုတိယနည်းလမ်းဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့အောက်ပါ command ကို run ခြင်းအားဖြင့်:
အောက်ပါ command များကို run ကြည့်ပါ။
ပြီးရင် command prompt ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည် terminal မှမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါက၎င်းသည် menu မှလည်းမှန်ကန်စွာစီရင်မည်။ command line sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1 တစ် ဦး တွင်ပရိုဂရမ်မဟုတ်လျှင်, အစဉ်မပြတ်မတိုင်မီကွပ်မျက်ခံရရမည်ဖြစ်သည် ဇာတ်ညွှန်းသို့မဟုတ်စီစဉ်ထားတာဝန် ၏အစ (start) မှာ operating system.
တစ်ခါကပြexecutedနာမရှိဘဲကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည် Outlet App အောက်ပါအချက်များပါသောပြတင်းပေါက်တစ်ခုကိုပြသည်။
မီနူး: ၄ င်းတွင်မူလစာမျက်နှာ၊ အမျိုးအစား၊ ဆက်တင်နှင့်ပါ ၀ င်မှုပါ ၀ င်သောရွေးချယ်မှု ၄ ခုရှိသည်။
Applications ကိုဘောင်: ၎င်းတွင်လူကြိုက်များသောအက်ပလီကေးရှင်းများ (လူကြိုက်များသောအက်ပ်များ)၊ လတ်တလောမွမ်းမံထားသော (မကြာသေးမီကမွမ်းမံထားသည့်) နှင့်အသစ်ထုတ်ဝေမှုများ (အသစ်ထုတ်လုပ်မှုများ) ဟုခေါ်သည့်လိုင်း ၃ ခုပြသသည်။
တိုတိုမှာ Outlet App ကျွန်တော်တို့ကိုသိရန်, install လုပ်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ applications များပေးထားပါတယ်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့လျှောက်လွှာအကြောင်းကိုခေါ် «App Outlet», ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဗဟိုရန်ခွင့်ပြုပါတယ် အွန်လိုင်းစတိုး ငါတို့အဘို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သော applications များ «Sistemas Operativos Libres y Abiertos» အသစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုပ်ပိုးပုံစံများအပေါ်အခြေခံပါတယ် (Flatpak, Snap နှင့် Appimage) ရရှိနိုင်; အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » App Outlet - GNU / Linux အပလီကေးရှင်းများအတွက် universal store
မင်္ဂလာပါ၊ မကြာသေးမီက application တစ်ခုကို appimage ဖြင့်စမ်းသပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်
ပြီးတော့ငါပြောခဲ့တဲ့အမှားနဲ့တူတယ်၊ ငါအဆုံးမှာငါစမ်းသပ်ဖို့သွားတယ်၊ ငါလည်းဒီပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာစပြီးမစုံစမ်းခဲ့ဘူး။
ဒီအမှားကဘာလဲ? Application ကို run ဖို့အတွက်အဲ့လိုလုပ်ရတာဟာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းလို့မရဘူးလား။
Jony127! ဤသို့မဟုတ်အခြား application တစ်ခုကို "/ opt / App Outlet / app-outlet" ကိုသုံးရန်ကြိုးစားပါ၊ ဤသည်မှာဖြတ်လမ်းသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သော terminal မှ -sandbox%% U ။ sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone = 1 ကိုစတင်ရန် –no-sandbox option သည်ပထမ command ကို run ရန်ရှောင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီ option ကိုငါအရင် command တွေသုံးစရာမလိုဘဲအဲဒါကို execute လုပ်နိူင်တယ်။ ငါ့မေးခွန်းကဒါကစနစ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သလား။ ငါ command ကိုနှင့်အတူလျှောက်လွှာ sandbox ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအသုံးမပြုဘဲလည်ပတ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်
အကယ်စင်စစ်သင်သည် Sandbox အပြင်ဘက်ကို run လျှင်တိုက်ခိုက်သူတစ် ဦး နှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အသုံးပြုသူအတွက်အထူးသဖြင့် GNU / Linux အသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေအလွန်သေးငယ်သည်။ ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ငါအကြောင်းရင်းနဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုဆက်ပြီးလေ့လာသွားမှာပါ။
Jony127! အကယ်၍ သင်သည်ဤ command line ဖြင့်ဖြေရှင်းသောအမှားကိုဆိုလိုလျှင်
အဘယ်အရာကိုမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အလိုအလျောက်မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုတိတိကျကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဒုတိယကြိုးစားခဲ့သမျှသည်အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားစာဖတ်သူတစ် ဦး ကဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Initiative သည် openSUSE Leap နှင့် SUSE Linux Enterprise ကြားရှိလုပ်ငန်းများကိုပေါင်းစည်းရန်ဖန်တီးခဲ့သည်